ပေါငျသနျး ၉၀၀ ဖွုနျးတီးမှု အတှကျ ယူနိုကျတကျကို ပွဈတငျဝဖေနျလိုကျပွီး လီဗာပူးကို ဥပမာယူရနျ တိုကျတှနျးလိုကျတဲ့ ရျောဘီဆားဗခြေျ့ - SPORTS MYANMAR
ပေါငျသနျး ၉၀၀ ဖွုနျးတီးမှု အတှကျ ယူနိုကျတကျကို ပွဈတငျဝဖေနျလိုကျပွီး လီဗာပူးကို ဥပမာယူရနျ တိုကျတှနျးလိုကျတဲ့ ရျောဘီဆားဗခြေျ့
ရျောဘီဆားဗခြေျ့ဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ လူသဈ စုဆောငျးရေး အသငျးကို ဝဖေနျ ပွဈတငျ လိုကျပွီး အသငျးကို အလုံးစုံ ဘယျလို ပွုပွငျ ပွောငျးလဲ ဆိုတာ လီဗာပူး ကို အဓိက ဥပမာ ယူသငျ့ တယျလို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
ဆားဗခြေျ့က “ယာဂနျကလော့ ဟာ လေးနှဈ အတှငျးမှာပဲ လီဗာပူး အသငျးကို ခနျြပီယံလိဂျ ၀ငျခှငျ့ ရဖို့ အတှကျသာ ရညျမှနျးခှငျ့ ရတဲ့ အသငျး အနအေထား ကနေ ခနျြပီယံဖွဈအောငျ ပွောငျးလဲဖို့ ဖွဈနိုငျတယျ ဆိုတာ ပွသ ခဲ့ပါတယျ။ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ ပရိတျသတျတိုငျး ကတော့ ဒါကို နာကညျြးစှာ နဲ့ပဲ ၀နျခံ သှားရ ပါလိမျ့မယျ။
ကလော့ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ အောကျတိုဘာလ က လီဗာပူး နညျးပွ ဖွဈလာ ခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ကစားသမားသဈ ချေါယူမှု အတှကျ ပေါငျ ၃၉၅ သနျး အသုံးပွု ခဲ့ပွီး အသားတငျ ငှကွေေး သုံးစှဲမှုဟာ ပေါငျ သနျး ရ၀ အောကျသာ ရှိပါတယျ။ ဒီအခြိနျမှာ သူဟာ အနျဖီးကို ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ယူဆောငျ ပေးလာ နိုငျခဲ့တဲ့ အပွငျ အဓိက ဖိုငျနယျ ၄ ခုကို ပို့ဆောငျ ပေးထား ခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူဟာ လကျရှိ အခြိနျမှာ လီဗာပူးကို ပရီးမီးယားလိဂျ အမှတျပေးဇယား ထိပျမှာ အမှတျအသာ နဲ့ ဦးဆောငျ နိုငျအောငျ လုပျပေး ထားခဲ့ ပါတယျ။
ယှဉျပွော ရရငျတော့ ကလော့ဟာ လီဗာပူးကို တိုးတကျ စခေဲ့ပွီး ယူနိုကျတကျ ကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂၁၀၃ ခုနှဈ ဆာအဲလကျဈ ဖာဂူဆနျ အနားယူ ခဲ့ပွီး နောကျပိုငျး ရုတျခညျြး ကဆြငျး သှားခဲ့ ပါတယျ။ နောကျဆုံး ၆ ရာသီကို ကွညျ့လိုကျမယျ ဆိုရငျ ယူနျိုကျတကျ ဟာ ခနျြပီယံ ဖွဈခဲ့တဲ့ အသငျးရဲ့ နောကျ ပမျြးမြှ ရမှတျ ၂၁.၅ မှတျ အကှာမှာ ရှိနေ ခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို ပွောရတာ ကြှနျတေျာ့ကို ရငျနာ စပေမေယျ့ သူတို့ဟာ အခု ခြိနျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ title race နဲ့ စပျဆကျမှု မရှိတဲ့ အသငျး ဖွဈနေ ပါတယျ။
လီဗာပူး ဟာ အိုးထရပျဖို့ဒျမှာ ရလဒျကောငျးလေ့ မရှိခဲ့ဘဲ နောကျဆုံး ၁၈ ပှဲမှာ ၂ ပှဲသာ နိုငျခဲ့ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ အခုခြိနျမှာ အနိုငျရဖို့ ရပေနျးစားတဲ့ အသငျး အနနေဲ့ သှားမှာပါ။ အကယျ၍ လီဗာပူး တို့ ရလဒျ ကွီးကွီးမားမား နဲ့ အနိုငျ ရခဲ့မယျ ဆိုရငျလညျး ဒါဟာ ကြှနျတေျာ့ကို အံ့သွ စမှော မဟုတျပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံး မနျနဂြော နဲ့ ၃ ဦးတှဲ တိုကျစဈကို ပိုငျဆိုငျ ထားလို့ပါ။
လှနျခဲ့တဲ့ ၄ နှဈက ၀ိုကျဟနျလိနျးမှာ တော့တငျဟမျ နဲ့ သှားရငျဆိုငျ ရတုနျးက ကလော့ ရှေးခယျြ ခဲ့တဲ့ ပှဲထှကျ ကစားသမား ၁၁ ယောကျကို ကွညျ့လိုကျပါ။ ခငျဗြားတို့ သူ့ရဲ့ ပွုပွငျ ပွောငျးလဲမှု ပမာဏကို တှရေ့ ပါလိမျ့မယျ။ အဲဒီ ၁၁ ယောကျက – မဈနိုငျလကျ ၊ ကလိုငျနီ ၊ စကာတယျ ၊ ဆာခို ၊ မိုရီနို ၊ ခနျြ ၊ လီဗာ ၊ မီနာ ၊ လယျလာနာ ၊ ကျောတငျညို ၊ အိုရီဂီ တို့ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈမှာတော့ ဒီထဲက ကနျြတဲ့သူ မရှိသလောကျ နညျးသှား ခဲ့ပါတယျ။
ကလော့ဟာ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီက အဆငျ့ ၈ နရော ရခဲ့တဲ့ အသငျးကို နောကျသုံးနှဈ အကွာမှာ ခနျြပီယံလိဂျ ရဲ့ ခနျြပီယံ အဖွဈ ပွောငျးလဲ ပေးနိုငျ ခဲ့ပါတယျ။ Wow! ဂိုးသမား အလီဆှနျ ၊ နောကျတနျး က ဗနျဒိုကျ တို့ကနေ စပွီး ရှတေ့နျးက မိုဆာလား နဲ့ ဆာဒီယို မာနေး တို့အထိ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ချေါယူမှု တှဟော ပေးခဲ့ ရတဲ့ ငှကွေေးထကျ အမြားကွီး ထိုကျတနျအောငျ စှမျးဆောငျ ပွခဲ့ ကွပါတယျ။
ကလော့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပှဲစဉျ တုနျးက ယူနိုကျတကျရဲ့ First Line-up ကို ယှဉျကွညျ့လိုကျပါ။ ဒီဂီယာ ၊ ဒါမီယနျ ၊ ဂြုံး ၊ စမောလငျး ၊ ရိုဟို ၊ ရှနိုကျဒါလငျး ၊ ရှဝိုငျးစတိုငျဂါ ၊ မာတာ ၊ ဟာရဲရား ၊ မာရှယျ ၊ ရှနျးနီ တို့ ဖွဈပါတယျ။ အမှနျပါပဲ။ ကွားထဲမှာ အပွောငျးအလဲတှေ ရှိခဲ့ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျ ဟာ ဖာဂီ ထှကျသှားပွီး နောကျပိုငျး ကစားသမားသဈ တှေ အတှကျ ပေါငျသနျး ၉၀၀ သုံးစှဲ ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ဟာ နောကျပွနျ သှားနပေါတယျ။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
ပေါင်သန်း ၉၀၀ ဖြုန်းတီးမှု အတွက် ယူနိုက်တက်ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပြီး လီဗာပူးကို ဥပမာယူရန် တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ရော်ဘီဆားဗေ့ခ်ျ
ရော်ဘီဆားဗေ့ခ်ျဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ လူသစ် စုဆောင်းရေး အသင်းကို ဝေဖန် ပြစ်တင် လိုက်ပြီး အသင်းကို အလုံးစုံ ဘယ်လို ပြုပြင် ပြောင်းလဲ ဆိုတာ လီဗာပူး ကို အဓိက ဥပမာ ယူသင့် တယ်လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
ဆားဗေ့ခ်ျက “ယာဂန်ကလော့ ဟာ လေးနှစ် အတွင်းမှာပဲ လီဗာပူး အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ခွင့် ရဖို့ အတွက်သာ ရည်မှန်းခွင့် ရတဲ့ အသင်း အနေအထား ကနေ ချန်ပီယံဖြစ်အောင် ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာ ပြသ ခဲ့ပါတယ်။ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ပရိတ်သတ်တိုင်း ကတော့ ဒါကို နာကျည်းစွာ နဲ့ပဲ ၀န်ခံ သွားရ ပါလိမ့်မယ်။
ကလော့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ က လီဗာပူး နည်းပြ ဖြစ်လာ ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူမှု အတွက် ပေါင် ၃၉၅ သန်း အသုံးပြု ခဲ့ပြီး အသားတင် ငွေကြေး သုံးစွဲမှုဟာ ပေါင် သန်း ၇၀ အောက်သာ ရှိပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ သူဟာ အန်ဖီးကို ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ယူဆောင် ပေးလာ နိုင်ခဲ့တဲ့ အပြင် အဓိက ဖိုင်နယ် ၄ ခုကို ပို့ဆောင် ပေးထား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာ လီဗာပူးကို ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်မှာ အမှတ်အသာ နဲ့ ဦးဆောင် နိုင်အောင် လုပ်ပေး ထားခဲ့ ပါတယ်။
ယှဉ်ပြော ရရင်တော့ ကလော့ဟာ လီဗာပူးကို တိုးတက် စေခဲ့ပြီး ယူနိုက်တက် ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၁၀၃ ခုနှစ် ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန် အနားယူ ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ရုတ်ချည်း ကျဆင်း သွားခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ၆ ရာသီကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ယူနိုက်တက် ဟာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသင်းရဲ့ နောက် ပျမ်းမျှ ရမှတ် ၂၁.၅ မှတ် အကွာမှာ ရှိနေ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို ပြောရတာ ကျွန်တော့်ကို ရင်နာ စေပေမယ့် သူတို့ဟာ အခု ချိန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် title race နဲ့ စပ်ဆက်မှု မရှိတဲ့ အသင်း ဖြစ်နေ ပါတယ်။
လီဗာပူး ဟာ အိုးထရပ်ဖို့ဒ်မှာ ရလဒ်ကောင်းလေ့ မရှိခဲ့ဘဲ နောက်ဆုံး ၁၈ ပွဲမှာ ၂ ပွဲသာ နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ အခုချိန်မှာ အနိုင်ရဖို့ ရေပန်းစားတဲ့ အသင်း အနေနဲ့ သွားမှာပါ။ အကယ်၍ လီဗာပူး တို့ ရလဒ် ကြီးကြီးမားမား နဲ့ အနိုင် ရခဲ့မယ် ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ကျွန်တော့်ကို အံ့သြ စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့ဟာ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး မန်နေဂျာ နဲ့ ၃ ဦးတွဲ တိုက်စစ်ကို ပိုင်ဆိုင် ထားလို့ပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်က ၀ိုက်ဟန်လိန်းမှာ တော့တင်ဟမ် နဲ့ သွားရင်ဆိုင် ရတုန်းက ကလော့ ရွေးချယ် ခဲ့တဲ့ ပွဲထွက် ကစားသမား ၁၁ ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ သူ့ရဲ့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ပမာဏကို တွေ့ရ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ ၁၁ ယောက်က – မစ်နိုင်လက် ၊ ကလိုင်နီ ၊ စကာတယ် ၊ ဆာခို ၊ မိုရီနို ၊ ချန် ၊ လီဗာ ၊ မီနာ ၊ လယ်လာနာ ၊ ကော်တင်ညို ၊ အိုရီဂီ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာတော့ ဒီထဲက ကျန်တဲ့သူ မရှိသလောက် နည်းသွား ခဲ့ပါတယ်။
ကလော့ဟာ ၂၀၁၅-၁၆ ရာသီက အဆင့် ၈ နေရာ ရခဲ့တဲ့ အသင်းကို နောက်သုံးနှစ် အကြာမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ရဲ့ ချန်ပီယံ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ Wow! ဂိုးသမား အလီဆွန် ၊ နောက်တန်း က ဗန်ဒိုက် တို့ကနေ စပြီး ရှေ့တန်းက မိုဆာလား နဲ့ ဆာဒီယို မာနေး တို့အထိ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ခေါ်ယူမှု တွေဟာ ပေးခဲ့ ရတဲ့ ငွေကြေးထက် အများကြီး ထိုက်တန်အောင် စွမ်းဆောင် ပြခဲ့ ကြပါတယ်။
ကလော့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ပွဲစဉ် တုန်းက ယူနိုက်တက်ရဲ့ First Line-up ကို ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီဂီယာ ၊ ဒါမီယန် ၊ ဂျုံး ၊ စမောလင်း ၊ ရိုဟို ၊ ရှနိုက်ဒါလင်း ၊ ရှဝိုင်းစတိုင်ဂါ ၊ မာတာ ၊ ဟာရဲရား ၊ မာရှယ် ၊ ရွန်းနီ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ပါပဲ။ ကြားထဲမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် ဟာ ဖာဂီ ထွက်သွားပြီး နောက်ပိုင်း ကစားသမားသစ် တွေ အတွက် ပေါင်သန်း ၉၀၀ သုံးစွဲ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဟာ နောက်ပြန် သွားနေပါတယ်။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။